Iimodeli ezahlukeneyo ishawa yelanga emfutshane
Ubunzima bomzimba: malunga. 5 kg
Ibhokisi ibhokisi 990 6.0 5.0 1.00 114.00 24.00 21.00
Ikholamu yethu yeshawari ubukhulu becala yenziwe ngamacandelo amabini. Kufuneka wenze ujikelezo olulula kunye nokudibana ngokwemiyalelo yethu ukudibanisa la macandelo mabini. Ukongeza, kukho izinto ezincedisayo ezincinci ezifuna kuphela imisebenzi elula. Ngokophando lwethu, yonke imisebenzi inokugqitywa ngumntu omnye.
Kwahlukile kwizibonelelo zeshawa zemveli, amanqaku ekholamu yethu yeshawari aqinisekisa ukubanakho kokubonelela abasebenzisi ngenkonzo yokuhlamba ngaphandle. Emva kokudlala, akusafuneki ukuba sibuyele ngaphakathi kwaye sicoce, kodwa sinokuthatha indawo yokuhlambela kuloo ndawo.
Ukuqinisekisa ubomi babo bokusebenza kunye nokuzinza, iishawari zethu zelanga zenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, kubandakanya ubhedu olunganyangekiyo umhlwa kunye nemibhobho ehlanganisiweyo yePVC. Ezi zinto ngoku zisetyenziswa ngokubanzi kwiimveliso ezikumgangatho ophezulu, eziqinisekisa kakhulu ubomi beenkonzo zeemveliso.
Ishawa yelanga yangaphandle i-100% inikwe amandla lilanga. Ayisebenzisi iingcingo kunye neebhetri. Ukuxhomekeka kuphela kumandla elanga, iimveliso zethu zinokufudumeza amanzi abandayo ukulungiselela umsebenzisi ukuba ahlambe. Olunye ulwazi lubonisa ukuba xa kuthelekiswa namanzi abandayo, amanzi ashushu anokunciphisa ukucaphuka kunye nomthwalo entliziyweni xa abantu behlamba.
Ubume becandelo elifutshane
Xa kuthelekiswa necandelo eliqhelekileyo eliqhelekileyo kwimarike ngoku, oko kukuthi, ikholamu yeshawari ehambisa amanzi entloko ukunika abantu ibhafu, le kholamu yeshawari icekeceke kwaye iyaguquguquka. Ixhomekeka ikakhulu kwimvula ebanjwa ngesandla ukubonelela abasebenzisi ngeenkonzo zokuhlamba. Le ndlela yokuhlamba ilungele abantu ukuba bahlambe kwaye bahlambe ngokucocekileyo. Kwangelo xesha, ubume obumbeneyo benza ikholamu yeshawari ihambelane ngakumbi kwaye ingabonakali kunxweme lolwandle kunye negadi.
Ishawa ebanjwa ngesandla
Sineeshawari ebanjwe ngesandla ecaleni kwale. Ingalwandisa kakhulu uluhlu lokucoca kwaye ikuncede uhlambe ngcono. Ngokongezwa kwesiphatho, ishawa yakho yangaphandle iya kuziva ngathi usekhaya.
Uhlobo: mnyama, isilivere
Egqithileyo Elungiselelweyo isilinda encinane isilinda ishawa yelanga
Okulandelayo: Ishawa yelanga